KEDU OTU ESI EME KA MPEMPE AKWỤKWỌ DỊ NA OKWU? - OKWU - 2019
Kedu otu esi eme ka mpempe akwụkwọ dị na Okwu?
Site na ndabara, Okwu na-eji usoro akwụkwọ eji eme ihe: A4, ọ na-agbadokwa n'ihu gị (a na-akpọ ọnọdụ a dị ka ihe osise). Ihe ka ọtụtụ n'ime ọrụ ndị ahụ: ma ọ bụ edetu ederede, edemede edemede na ihe omume, na ihe ndị ọzọ - edoziwo na ụdị dị otú ahụ. Ma mgbe ufodu, a choro ka mpempe akwụkwọ dinara ala (odida odida ala), imaatu, ma oburu na ichoro itinye ihe oyiyi nke adighi adi nma n'ile ya.
Tụlee ihe 2: lee ka ọ dị mfe ịmepụta akwụkwọ akụkọ na Okwu 2013, na otu esi eme ya n'etiti akwụkwọ (nke mere na akwụkwọ ndị ọzọ dị n'akwụkwọ a na-agbasa).
1) Nke mbụ, mepee taabụ "PAGES MARK".
2) Nke ọzọ, na menu nke meghere, pịa na "Usoro" na họrọ akwụkwọ mpịakọta. Lee nseta ihuenyo n'okpuru. Ihe niile ederede n'ime akwụkwọ gị ga-agha ụgha ugbu a.
1) N'okpuru foto a, e gosipụtara ókèala abụọ - na mgbe ha abụọ dị na ya. Iji mee ka onye ọ bụla n'ime ha dị na nlekọta anya (na ụdị niile na-eso ya), debe ya na kọntaktị ma pịa "obere akụ", dịka akara uhie dị na nseta ihuenyo.
2) Na nchịkọta nke mepere emepe, họrọ nhazi ihuenyo na "tinye aka na njedebe nke akwụkwọ" ahụ.
3) Ugbu a, ị ga-enwe otu akwụkwọ - akwụkwọ dịgasị iche iche: ma ọdịda na akwụkwọ. Hụ akụ na-acha anụnụ anụnụ n'okpuru ebe a.